Astaanta Rainbow ee Apple ayaa heshay diiwaangelin cusub oo ujeeddooyin ganacsi ah | Wararka IPhone
Astaanta qaansoroobaad ee Apple waxay heshay diiwaangelin cusub oo ujeeddooyin ganacsi ah
Markan nalama soo food saareyno diiwaangelin dhinac saddexaad ah oo ku saabsan astaan ​​ama wax la mid ah sidii ku dhacday astaanta dharka Talyaaniga, Steve Jobs, dhowr bilood ka hor. Apple waxay rabtaa inay ku raaxaysato astaanta astaanta sanadaha 80 iyo 90, sidaa darteed waxay go'aansadeen inay diiwaangeliyaan xuquuqda astaantan astaanta u ah si loogu daro maqaallada kala duwan ee dharka sida koofiyadaha.
Xaqiiqdii qaar badan oo ka mid ah kuwa meesha jooga ayaa durbaba gacmaha xoqaya oo sugaya inay arkaan sida dharka noocaan ah u bilaabmayo in loo ganacsado, laakiin ma jiraan wax runta ka fog mana u muuqato in Apple ay qorsheyneyso inay soo saarto xarriiq cusub oo dhar ah ama wax badan ka yar, waxay si fudud ugu isticmaali lahaayeen ujeedooyinkooda iyo hadiyado ama dhar loogu talagalay shaqaalaha laftooda.
Taariikh kooban oo ku saabsan astaantaan
Steve Jobs qudhiisa ayaa u xilsaaray naqshadeeye garaafka ah Rob Janoff inuu dib u qaabeeyo astaantan wax ka casrisan Janoff waligiis kuma fikirin in astaantiisu noqon doonto mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan taariikhda shirkadda. Sida uu sheegayo naqshadeeyehani, qaniinyada tufaaxa waxaa lagu daray "in lagu garto astaanta tufaax ee aan lagu aqoonin yaanyo." Intaa waxaa dheer, waxaa jira ciyaar xiiso badan oo ku saabsan ereyada: qaniinyo (qaniinyo) / bate, tixraac cad oo ku saabsan nooca farsamada shirkadda.
Sannadkii 1977-dii calaamadda Apple waxay adeegsatay midabada qaanso-roobeedka gudihiisa waxaana la sheegay inay ahayd go'aan uu qaatay Steve Jobs qudhiisa, inuu "dadnimo ku sameeyo" shirkadda isla markaana kor loogu qaado teknolojiyadda midabka casriga ah ee ay gacmahooda ku hayaan. Janoff, wuxuu sheegay in isku habeynta midabyada aysan sabab gaar ah u lahayn, marka laga reebo xaqiiqda ah in cagaaran ay tahay inuu korka saaran yahay, maxaa yeelay taasi waa meeshii ay caleentu jirtay. Maanta waa kan ugu caansan dhammaan astaamaha Apple.
Maanta Apple waxay sii wadaa cusbooneysiinta diiwaanada kiiskanna wuxuu dhacay maalmo ka hor sida asxaabta AppleInsider u sharaxeen, laakiin waa wax lala yaabo inaysan rabin inay ka faa'iideystaan ​​astaanta loo yaqaan 'vintage logo' ee saxiixa tufaaxa qaniinay. Sikastaba astaanta ayaa wali ah mid ay jecelyihiin dadka isticmaala Apple kuwaas oo la socday dhaqdhaqaaqa astaanta muddo dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Astaanta qaansoroobaad ee Apple waxay heshay diiwaangelin cusub oo ujeeddooyin ganacsi ah
Beta seddexaad ee loogu talagalay watchOS 4.3 horumariyayaal hadda la heli karo
Alto´s Odyssey hadda waxaa laga heli karaa iPhone, iPad iyo Apple TV